Wadahadalo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Armenia oo ka socda dalkaas – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaWadahadalo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Armenia oo ka socda dalkaas
Wadahadalo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Armenia oo ka socda dalkaas
22/04/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Apr 22, 2018:- Wadahadalo ku saabsan xasaradaha siyaasadeed ee ka alloosan dalka Armenia ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inay ka qabsoomaan caasimmadda dalkaasi ee Yerevan.
Dalka oo dhaca xadka qaaradaha Aasiyo iyo Yurub, horayna uga tirsanaa midowgii Soviet-ka ayaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nikol Pashinyan oo isagu horkacayay dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda wadankaasi ayaa sheegay in waxa keliya ee ay ka wadahadlayaan ay tahay iscasilaada raysal wasaaraha dalkaasi Serzh Sargsyan, iyo sidii uu xilka u wareejin lahaa.
Mr Pashinyan ayaa kumanaan qof oo dibadbaxayay u sheegay in raysal wasaare Sargsyan uusan fahansaneyn waaqica jira, balse Sargsyan ayaa dhankiisa sheegay in sababta uu ugu baaqay wadahadalka ay tahay in laga hortago dhibaatooyin aan laga soo waaqsan Karin.
Dadka dibadbaxa dhigaya ee dalkaasi ayaa ka carooday wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka dalkaasi, taasi oo keentay in awooda laga wareejiyo madaxweynaha dalka, loona weeciyo raysal wasaaraha.
Wax ka bedelkaasi lagu sameeyay dastuurka Armenia ayaa waxaa ansixiyay raysal wasaaraha imika lagu dheganyahy.
Nin Ururka Xamaas ka tirsan oo lagu toogtay dalka Malaysia
AKHRISO:- Khilaaf ka dhashay Shir ka socday magaalada Muqdisho